काठमाडौँ । भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकरले आगामी बुधबार नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् ।
जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि पहिलो पटक नेपाल आउन लागेका हुन् ।
जयशंकर नेपाल भारत संयुक्त कमिसनको पाँचौ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकरी दिएको छ ।
सन् १९८७ मा स्थापना भएको ज्वाइन्ट कमिसनको पछिल्लो बैठक २०१६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । गत फेब्रुअरीमै हुनुपर्ने यो बैठक भारतमा हुनलागेको आम निर्वाचनका कारण अगष्टका लागि सरेको थियो ।
ज्वाइन्ट कमिशनको अध्यक्षता नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप् ज्ञवाली र भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले संयुक्त रुपमा गर्ने छन् ।
ज्वाइन्ट कमिशनको बैठकमा दुई देशबीचको सम्बन्ध कनेक्टिभीटी, आर्थिक पार्टनरसीपसहित विभिन्न क्षेत्रमा आपसी सहयोग, व्यापार, उर्जा, जलस्रोतका विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयले जानकरी दिएको छ ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा जयशंकरले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेंटने कार्यक्रम रहेको छ ।
जयशंकर नेपालमा भूकम्पपछि भारतको नाकाबन्दीका प्रमुख योजनाकार मानिन्छन् । संबिधान निर्माणको अन्तिम समयमा भारतीय विदेश सचिव रहेका जयशंकर भारत सरकारको विशेष प्रतिनिधिको रुपमा नेपाल आएर संबिधान जारी नगर्न नेपालका नेताहरुलाई दबाब दिएकोले नेपालको उनको नकारात्मक छबी रहेको छ ।
दुई दिने भ्रमण पुरा गरि जयशंकर विहिबार स्वदेस फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।
जयशंकरको साइड इफेक्ट : ट्वीटरमा भिड्दै छन् भट्टराई र थापा
काठमाडौँ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपालको दुई दिने भ्रमण सकेर स्वदेस फर्किसकेका छन् । तर जयशंकर फर्केपछि उनको भ्रमणका साइड इफेक्ट विस्तारै बाहिर आउदै छन् । यसै प्रसंगमा अहिले समाजवादी
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई विभिन्न नेताहरुले भेटेका छन् । जयशंकर बसेको होत द्वारिकाजमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले भेट गरेका छन्
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमण : खराब छबी सुधार्न कति सफल ?
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकर दुई दिने भ्रमण पुरा गरी आज स्वदेश फर्किदै छन् । बुधबार अपराहन्न बंगलादेशबाट काठमाडौँ ओर्लिएका जयशंकरको दैनिकी व्यस्त रह्यो । जयशंकरले काठमाडौँ
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको छ । दुई दिने नेपाल भ्रमणको आज दोस्रो दिन जयशंकरले राष्ट्रपति निवास शित्तल निवास पुगेर राष्टपति